စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးရမည် | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !
စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးရမည်	January 26, 2008
Filed under: MY POEMS — Nyo Gyi @ 1:39 pm ဇန်န၀ါရီ (၂၁)ရက်၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေး ကဗျာကို အားကျသဖြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးဖွဲ့လိုက်ပါသည်။
2 Responses to “စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးရမည်”	:) Says:	January 27, 2008 at 12:52 pm ကိုညိုကြီး
၁။ ခင်ဗျား စီဘောက်က ပျူစာတွေပဲ ပေါ်နေတယ်။ ဇော်ဂျီဝမ်းပေါ်အောင် http://www.cbox.ws ကိုသွားပြီး ဇော်ဂျီဝမ်း သွင်းပေးရမယ်။
၂။ အပေါ်မှာ ကျနော်ပေးထားတဲ့ လိပ်စာကို ကလစ်ပါ။ ပုံတပုံ ထွက်လာမယ်။ ပုံမှာ အနီဝိုင်း ၂ခုပြထားတယ်။ http://www.cbox.ws ရောက်ရင် အဲဒီအတိုင်း ပြင်ပါ။ ပြီးရင် Apply လုပ်ပါ။ ၃။ ဒါဆို Your code has changed. Get your new code here and reinstall your Cbox.ဆိုတဲ့စာသား ပေါ်လာမယ်။ ၄။ here ကို နှိပ်ပါ။ step 1 နဲ့2ဆိုပြီး ပေါ်လာမယ်။ step 1 မှာပါတဲ့ဟာတွေကို ကူးပြီးတော့ ခင်ဗျားရဲ့ဘလော့ဂ် Templateမှာ သွားထည့်ရမယ်။
၅။ အပေါ်မှာ ပြောထားတာတွေ အားလုံး ခင်ဗျား လုပ်ပြီးသား ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ရင်းနဲ့ ၂ခု မှားနိုင်တယ်။ Zawgyi-One လို့ မရေးဘဲ Zawgyi_One လို့ မှားရေးထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်လုံးမှားတာနဲ့ မြန်မာလိုမပေါ်တော့ဘူး။ ပျူစာလိုပဲ လေးထောင့်တွေ ပေါ်မယ်။😀
နံပတ်၎မှာလုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေကို အပြည့်အစုံ မလုပ်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
Reply	:) Says:	January 27, 2008 at 12:52 pm ကိုညိုကြီး
Another Similar My Wordpress Blog
MY ORIGINAL BLOG (bigbbrown.blogspot.com)
My Similar Blog (in Multiply.com)
To see words of my Blog, DOWNLOAD MYANMAR FONT
Categories	"MEDIA to MEDIA" FIGHTING
DAW AUNG SU KYI
Luu Htu Daw Ah Mar
MY POEMS (Myanmar Language)
SEPTERMBER GOLDEN REVOLUTION
Recent Comments	Shweyee Winhlaing on သို့ … ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ…aung ko on >PITIFUL YOUTH OF BURMA…Nyo Gyi on MTV EXIT Live in Myanmarnazia shah on MTV EXIT Live in Myanmarnazia shah on အဓိက ကတော့ စနစ်ပဲ	Top Posts	Post အသစ်များကို Original Blog တွင် ဆက်လက်တင်ဆက်နေပါသည်	Recent Posts	Post အသစ်များကို Original Blog တွင် ဆက်လက်တင်ဆက်နေပါသည်
"လူကြီးသားသမီးလည်း အပြစ်လုပ်ရင် အရေးယူမှာပဲ" ဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ပြောကြား
National Network for Educational Reform (NNER) ~ Myanmar
Aung San’s Birthday ~ Feb 13, 1915
Valentine’s Day and Burma (Myanmar)
မင်းသားတွေက ကိုယ့်နေရာကိုယ် မနေကြတော့ဘူး ~ ဧရာ
သန်းရွှေ အသုဘမှာ က ကြစို့
သတင်းပေးသူအား လုံးဝလျှို့ဝှက်ထားရန် တာဝန်ယူပါသည်
A Myanmar Local Journal published U Than Shwe and U Maung Aye Photo with their regime faults
တကယ်တော့ ဦးကို ပိုင်တာ မီးပါ ဦးရယ်…
အဓိက ကတော့ စနစ်ပဲ
354 Days left to 27th SEA Games in Myanmar, 2013
MTV EXIT Live in Myanmar
Blog Stats	28,411 hits